Iwo matsva matsva aunoziva kusati kwasvika kweIOS 14 | IPhone nhau
Idzo nyowani nyowani dzaunoda kuziva kusati kwasvika kweIOS 14
Kuuya kweIOS 14 kwave pedyo, kunyangwe chiri chokwadi kuti parizvino tiri kubata yechisere Beta vhezheni yesisitimu inoshanda iyo iyo Cupertino kambani yakagadzirira iyo iPhone (iPadOS yeiyo iPad), zvinhu zvitsva zvinoramba zvichioneka maererano nekushanda kwayo. izvo hazviendi zvisingaonekwi uye kuti tauya kuzokuudza.
Tinoda kukuratidza maitiro ekushandura default browser muIOS 14 uye mamwe manomano aunofanirwa kuziva isati yatanga kuburitswa zviri pamutemo. Nenzira iyi iwe unenge wakagadzirira zvakakwana kuvhurwa kwayo kwepamutemo, semazuva ese, ku iPhone News isu tiri pano kuzokuratidza idzi nhau.
Pane ino nguva isu tasarudza kuperekedza idzi nhau nevhidhiyo diki iyo yatinokusiya iwe kumusoro. Ino inguva yakanaka yekutarisa mashandiro ayo munguva chaiyo uye kunyorera kune iPhone News chiteshi uye tibatsire isu kuramba tichikura neruoko rwako uye kukuunzira zvakanakisa zvemukati izvo zvaunogara wakamirira.
1 Chinja default maapplication
2 Tora kuputika nebhatani bhatani
3 Headphone odhiyo yemhando marongero
Chinja default maapplication
Munguva pfupi yapfuura shamwari yedu Karim yataura newe nezvekuti tinga shandure sei default browser muIOS 14, nenzira iyi tichakwanisa kumisikidza Google Chrome kwenguva yekumhanyisa mashandiro ayo kusvika parizvino aingorambidzwa chete kuSafari. Aya ndiwo matanho aunofanira kutevera:
Iye zvino zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kuita uku hakunyanyo kuganhurirwa kuGoogle Chrome, Ndiri kureva, mamwe mashandisirwo anozovandudzwa gare gare kuitira kuti tikwanise kunyatsogadzira nharembozha yedu uye tigoendesa nemamwe maficha aripo muIOS kekutanga, ichiwedzera mukana wekubvisa zvakananga mashandisiro acho muchirongwa.
Gare gare tichaona, semuenzaniso, iyo yekugadziriswa kweemail application, pakati pevamwe Spark, kubva kuReaddle, yatove yakazivisa izvozvo inogona kumisikidzwa seyakavimbika email manejimendi yekushandisa neIOS, Zvichakadaro, isu tinofanirwa kuenderera mberi nekumirira Apple kuti ipe mvumo yakawanda.
Tora kuputika nebhatani bhatani
Apple iri kugara ichiisa nekubvisa kumwe kushanda muIOS 14, Isu tinofungidzira izvozvo nekuti kusimudzira kwacho hakusi kugutsa kana kungoti nekuti kushandiswa kwezuva nezuva kwaratidza kuti pfungwa yeshanduko haina kuzobuda kuva yakanaka chose.
Muenzaniso watinawo ne "reflex mode" ye selfie Photography, mamiriro akaonekwa mumavhezheni ekutanga eBeta muIOS 14, asi pasina chikonzero chakajeka Apple yakaita kuti inyangarike mune dzimwe shanduro. Isu tinofungidzira kuti muchokwadi kugona uku hongu ichauya kuIOS 14 kana tangotanga kuvhurwa zviri pamutemo.
Kune chikamu chayo, chimwe cheanoshanda ayo akanyangarika zvisingaite ndeekutora mafoto "akaputika" zvakananga nemabhatani evhoriyamu. Nekudaro, mumarongero ekamera patova nemukana wekumisikidza bhatani iri kutora mifananidzo mu «kuputika» fomati.
Zvichakadaro, Apple yakanga yafunga kudzora kugona uku uye chinhu chega chataigona kuita kuputika nekudzvanya bhatani rekutora pachiratidziri. Uku ndiko kukanganisa kwevashandisi vazhinji vanonyatsoshandiswa kutora mifananidzo neiyi bhatani repanyama. Apple yave kukwanisa kugadzirisa.
Headphone odhiyo yemhando marongero
Pakupedzisira iyo Cupertino kambani yafungao kunatsiridza mhando yemanzwi eMFi mahedhifoni, zvese zvine wired uye zvisina waya mune yakachena AirPods maitiro, nekuti izvo zvakaburitsa mamiriro anogona kuwanikwa nyore.
Iwe unogona kutarisa muvhidhiyo kumusoro kwemenu inotungamirwa iyo nzvimbo dzese dzemutsindo dzinozo nyatso gadziridzwa kuitira kuti tiwedzere ruzivo rwedu nemhando yekuteerera mune mahedhifoni, chimwe chinhu icho Apple chiri kuisa kukoshesa kwakawanda munguva pfupi yapfuura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 14 » Idzo nyowani nyowani dzaunoda kuziva kusati kwasvika kweIOS 14
Mavara matsva uye kuchaja nekukurumidza kweApple Watch Series 6
Microsoft inotsoropodza mutemo mutsva weApp Store wekutamba mitambo